Sida lagu Helo Your Boostada List Macaamiishan in Xeerka on Wargeysyada Your badan
MOWDUUCYADA:U dir Pulse
Ma waxaad ka akhrisan iyo dhaqmaan on ALL farriimo u dhiibay in mailkooda email aad? Ma waxaad ma seegeen dalabyo alaabta weyn iyo fariimaha shakhsiga haddii aad calaamadee fariimaha email for tirtirka iyaga oo aan reading? Ma waxaad tahay qof ganacsade internetka isticmaalaya email marketing sida hab weyn oo gaarey dhagaystayaasha aad bartilmaameed? Waxaad gaari karo natiijo ka wanaagsan adiga oo isticmaalaya U dir Pulse.
All marketers internet halis ah soo diri Joornaalo. Iyada oo nidaamka of email marketing, ganacsatada digital isticmaali wargeysyada joogtada ah si ay isu suuq in ay macaamiisha gudahood liiska waraaqaha ay. Diraya wargeysyada shakhsi via email marketing waa habka ugu toos ah si ay u gaaraan macaamiishu aad. Dhibaatadu waxa ay si kastaba ha ahaatee waa in macaamiishu email ugu ha furin emails marketing; iyo marketers internet ma oga tirada macaamiisha falaysaan.
Ku qor SendPulse. Tani waa qalab digital kaas oo aad ka heli karto macaamiishu aad akhriska iyo ficil on wargeysyada aad. Beyond hesho liiska email aad in ay ka jawaabaan wargeysyada aad, SendPulse waxaa loogu talagalay si loo hubiyo in farriimo aad gaarto dhagaystayaasha aad bartilmaameed meelkasta oo ay joogaan, mar walba, iyo shakila'aan. Haddii aadan rabin inuu ka tago lacag on miisaskii macaamiishu aad, SendPulse waa aalad lagu taliyey in iyaga aad ku bixinayso saacba.
SendPulse ayaa lagu dhisay si ay ugu adeegaan baahida email marketing saddex siyaabood oo waaweyn. Halkan inay yihiin -
Kordhinta Emails Clickthrough
Waxaa horeba waa on diiwaanka in aad ku tiirsan yihiin olole email marketing joogto ah si ay u gaaraan dhagaystayaasha aad bartilmaameed. Laakiin SendPulse aad sii caawisaa. Waxay hubisaa in macaamiishu u furay emails aad iyo fal iyaga on at dheeraad ah 50% heerka guusha. Marka fursadaha macaamiishu ka jawaabaya wargeysyada aad loo kordhiyo ilaa 50%, waxaad noqon kartaa qaar ka mid ah pre-iibinta more.
Halkan waxaa ku faa'iidooyinka isticmaalaya SendPulse aad ololeyaal suuq email -
50% fursado kor u qabo emails aad furay
Server SMTP SendPulse ee hubisaa gaarsiinta ee emails aad loo eegin emails maamuuska ku qaata '
sirdoonka macmal loo sameeyo emails ka jawaabaan, tirakoobka on emails furan, iyo jadwaliye for diraya baxay emails ee taariikhaha gaar ah.
Notifications Web loosoo
wargelin Web riix waa fursad si ay u gaaraan macaamiishu aad on qalabka oo dhan in ay qortey shubo emails ama ma. Waxay bixisaa oo aad ka heli in liiska waraaqaha aad macaamiishu oo aan run ahaantii populating mailkooda email ay la fariimaha shakhsiga. Iyadoo riix web, kuu soo sheegi karaan macaamiishu of updates muhiim ah xitaa marka ay ma xiran internetka.
technology wargelinta SendPulse waxaa loogu tala galay in ay gaaraan macaamiishu la fariimaha riix eegin qalabka iyo daalacashada. Ujeeddada kama dambaysta ah waa in la helo farriimo aad idil, si macaamiishu aad iyo aad u hesho iyaga u dhaqmaan waxa ay ku xirnayn xaallada ay naftooda u helaan. farriimaha Web riix ha buux-inboxes email, weli macaamiishu iyaga hesho iyo in aad hesho heerka clickthrough xaqiijin karo fariimaha aad shakhsiga.
Waxaa jira nidaamyo kala duwan waxaa loogu talagalay diraya SMS bulk, laakiin SendPulse iyaga oo dhan trumps. Iyadoo technology SMS bulk SendPulse ee, waxay kuu soo diri kartaa kun oo fariimaha shakhsiga si ay macaamiishu aad on taleefannadooda gacanta. Halkee macaamiishu ma ay awoodaan in ay gasho emails ay u akhriyo wargeysyada ama helaan farriimaha riix, waxaad iyaga ku soo diri kartaa SMS aan arrimaha wax. Iyadoo hal click, aad fariin qoraal kartoo isku kun oo macaamiishu aad soo diri kartaa oo ay leeyihiin u dhiibay taleefannadooda gacanta ugu dhow isla waqtiga iyo daqiiqad.
Maxaa kale Waa in aad ka ogaato SendPulse?
SendPulse badan si ay u bixiyaan marketers internet iyo ganacsiyada yar yar oo kale. Qaar ka mid ah kuwani waa -
Kartida aad u astaysto boqolaal arrimo email for Joornaalo
Jadwaliye for diraya baxay emails siiyey at taariikhaha gaar ah
Foomamka Times ee soo ururisa emails soo booqda webka '
Analytics lagu qiyaaso heerka furan email, links riixi iyo sidoo kale goobta macaamiishu
isdhexgalka Easy la kala duwan dhufto ee CMS iyo ecommerce
Liberty in ay kor u soo dir 15,000 emails habka lacag la'aan ah bil kasta
SendPulse waxaa la dhisay ka dhulka iyo ilaa si loo daboolo baahida dhammaan qaybaha marketers online. Waxaa danbeeyay by marketers for marketers, iyo sirdoonka macmal dhafan heli karo macaamiisha si ay u qabtaan falalka la doonayey muuqan. SendPulse waa qalab lacag-qaadashada cusub in ganacsadaha kasta waa in aad dhaqaajiso maanta fiicnaaday waayo aragnimo ganacsi; ka dibna, ay timaado lacag la'aan u ah in la isticmaalo oo aan wax waajibaad qarsoon.
Be the first to comment on "U dir Pulse: Sida lagu Helo Your Boostada List Macaamiishan in Xeerka on Wargeysyada Your badan"